Iyini inqubo yokucubungula umshini wokwenza isikhwama sikadoti?
1.Qala injini eyinhloko, gijima ngesivinini esiphansi, bese ulungisa isilawuli sendawo eseceleni ukuze uhlukanise ifilimu ngesigamu endaweni ephakathi. Lungisa ama-nip roller angakwesokunxele nangakwesokudla ukuze aqondanise amafilimu angakwesokunxele nangakwesokudla, futhi ulungise ama-nip roller angaphambili nangemuva ukuze aqondanise amaphethini. Lungisa...
Izinkinga eziningana ezivamile zomshini wokwenza izikhwama kanye nezinyathelo zokuphikisa
Umshini wokwenza isikhwama umshini owenza ukupakishwa kwepulasitiki okuhlukahlukene noma ezinye izikhwama zokufaka izinto ezibonakalayo, futhi uhla lwawo lokucubungula lungamasayizi ahlukahlukene epulasitiki noma ezinye izikhwama zokufaka izinto ezinobukhulu obuhlukahlukene kanye nokucaciswa. Kunjalo, ohlelweni lokusebenzisa...
Isizinda sokukhiqiza somshini wokwenza isikhwama sikadoti othomathikhi
Umshini wokwenza isikhwama umshini owenza zonke izinhlobo zezikhwama zokufaka zepulasitiki noma ezinye izikhwama zokufaka izinto ezibonakalayo. Uhla lwayo lokucubungula lungamasayizi ahlukahlukene kanye nobukhulu bepulasitiki noma ezinye izikhwama zokufaka izinto ezibonakalayo. Ngokuvamile, izikhwama zokupakisha zepulasitiki ziyi-ma...
Inqubo evamile yomshini wokwenza isikhwama esingalukiwe
Izikhwama ezingezona ezilukiwe ngokuvamile zisebenzisa inqubo yokuphrinta isikrini, evame ukubizwa ngokuthi "ukuphrinta kwesikrini", okuhlale kuyinqubo evamile yokunyathelisa kubakhiqizi abaningi. Ngoba ngokuvamile ukuphrinta ngesandla, futhi umbala wenqubo akulula ukuwulawula, njengoba amakhasimende...